Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး: မာတင် Vrijland
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မေလ 29 2019 အပေါ်	•3မှတ်ချက်
ကြှနျုပျတို့သညျ "အန်း၏ဖခင်" မပြောတတ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ဘယ်မှာအန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးကိစ္စတွင်ပတျဝနျးကငျြမီဒီယာပြပွဲမျက်မြင်နောက်တဖန်မနေ့ကခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ကြောင်းအဖြစ်အများအပြားအခွင့်အရေးများထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ်သောလူသတ်မိုက်ကယ်ပီ "အန်း၏ဖခင်" ၏ဖျက်သိမ်းရေးများအတွက်ကိုယ်ချင်းစာအနိုင်ရခဲ့သည့်တစ်ဦးငြင်းခုံခဲ့ [ ... ] သောသူမူဒါအမျက်ထွက်ခဲ့သည်
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 28 2019 အပေါ်	• 18 မှတ်ချက်
မိုက်ကယ် P. အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူဘယ်မှာရှိလိမ့်မည်သည့်အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဖွယ်ရှိတဲ့ PSYOP (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး) ဖြစ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်အများအပြားဆောင်းပါးများကို၌ငါဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ဥပဒေပြုမှတဆင့်တွန်းဖို့စစ်ဆင်ရေး။ ယနေ့ mews ကနေမျောက်ကအရမ်းရှင်းပါတယ်လာပါတယ်။ အဆိုပါအခွခေံမူပြဿနာများ၏သက်သေပြ, တုံ့ပြန်မှု၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာဖြေရှင်းနည်း။ သငျသညျဖန်တီး [ ... ]
ပိုပြီး TBS စိတ်ရောဂါစာမေးပွဲမပါဘဲဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးကိစ္စတွင်ရလဒ်
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ42018 အပေါ်	•2မှတ်ချက်
များစွာသောလူဖြစ်နိုင်သည်အစဉ်အဆက်အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးမိုက်ကယ် P. ကဲ့သို့ကြီးမားသောအမှုအရာမလိုချင်ကြပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး (PSYOP) ဖြစ်ရပြီနိုင် - သစ်ကိုအတိုင်းအတာတဆင့်တွန်းအားပေးရန် - နီးပါးကဤကိစ္စတွင်၏ဟောကိန်းထုတ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပုံရသည် ချက်ချင်းကြောင်းအမှုအပြီးမြင်နိုင်ဖြစ်လာသည်။ ငါ [ ... ]
ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူလုပ်ဖို့မိုက်ကယ် P. နှင့်အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးအရာအဘယ်သို့ပြု? 1 သန်းအနိုင်ရ!
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 15 2018 အပေါ်	•6မှတ်ချက်
သငျသညျအရာတစ်ခုခုကြီးမားသောသက်ရောက်မှု uncriticised ဖြတ်သန်းချင်လျှင်, တကကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရပ်သည်လုပ်ဖို့အမြဲကောင်းလှ၏။ ပြည်သူ့ပြီးသားကြောင်းဖြစ်ရပ်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်နေဆဲဖြတ်သန်းဘယ်အရာကိုမြင်ပေမယ့်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်လုံးလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌တည်ရှိ၏နေကြသည်။ သငျသညျ [ ... ] ထို့နောက်နိဂုံးချုပ်သူတို့ကိုမချစ်
ဥပဒေရေးရာတွေးဝံ့စရာဖြစ်ရပ်ဆန်း: တရားရုံးတွင်မပြသအန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးမိုက်ကယ် P. အပေါ် DNA ကိုသက်သေအထောက်အထားများ, မှုခင်းနှင့်သူသခှေဲစိတျခွငျးအစီရင်ခံစာ
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 12 2018 အပေါ်	• 15 မှတ်ချက်
သငျသညျအစဉျအမွဲအနေနဲ့စွပ်စွဲ deranged ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ခုတည်းကိုသာတစ်ဝန်ခံအပေါ်အခြေခံပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အမှုမြင်ပြီလော ၏သင်တန်း [ ... ] ငါတို့ရှိသမျှသည်မိုက်ကယ် P. ကြောက်မက်ဘွယ်သောအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့်လူသတ်ကြောင်းယုံကြည်ရန်ရှိသည်များနှင့်ပညာရှိအန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးသည့်အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းရာသီဥတုကတညဉ့်တခုတခုအပေါ်မှာအပြစ်မဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနင်းအောင်ခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့်အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးသည့် Scooter မိုက်ကယ် P. ဦးတည်ချက် Soesterberg နောက်ကွယ်မှတိုးမြှင်?
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 12 2018 အပေါ်	• 24 မှတ်ချက်
အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးများ၏စွပ်စွဲမုဒိမ်းမှုနှင့်လူသတ်မှုပတ်လည် session ရဲ့လွှမ်းခြုံမိုက်ကယ် P. (Panhuis) အန်းသည်သူ၏ Scooter ပေါ်မှာထိုင်ဖို့နောက်ကျောအတင်းအဓမ္မခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ထငျရှားပါသညျ။ (ထို storyline ၌ဤပြုပြင်မွမ်းမံ / ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း Read) ။ ဤတွင်သူ [ ... ] သူမ၏အတူတကွ cable ကိုလည်စည်းနှင့်အတူသူမ၏လက်ပေါ်မှာကသူ့ဦးထုပ်ထားရှိသည်မယ်လို့
တရားခွင်အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးကိစ္စတွင်န်းကျင် (နမူနာ) မိုက်ကယ်ပီအတွက်အတော်ကြာမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုအမှုပေါင်း
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 11 2018 အပေါ်	• 16 မှတ်ချက်
ဒါဟာစမ်းသပ်မှုမှာတိုက်ရိုက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ဖို့မခက်ခဲကြောင်း, ဒါကြောင့်ငါ Saskia Belleman ကြေးနန်း၏ချက်တွေကိုအတူပြုပါစေရန်ရှိသည်။ ငါပြည်ပမှာနေထိုင်နှင့်ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကြောင့်မခံနိုငျကွောငျးပေးတော်မူ၏။ သို့သျောလညျးပဲ [ ... ] ထွက်ခုန်
နာသန် Fidder မိတျဆှေသူမိတ်ဆွေများကဆိုပါတယ်ဘယ်မှာအန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးကြေးနန်းရှေ့စာမျက်နှာ,?
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ22018 အပေါ်	• 17 မှတ်ချက်
ယနေ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့တပြင်လုံးကိုအရာ psyop အပေါ်အခြေခံပြီးသောစိတ်ကူးပေါ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲသလိုပဲအန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးန်းကျင်ကိုတစ်ဦးအလွန်မျက်စိ-ဖမ်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူကြေးနန်းကနေဆောင်းပါးယနေ့ပုံနှိပ်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုထွက်မတ်တပ်ရပ်, ကောင်းစွာဖတ်။ အဘယ်သူမျှမဖော်ပြထား [ ... ] ရှိပါတယ်
အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးပထမဦးဆုံးရုတ်တရက်နေဆဲ၌သင်္ဂြိုဟ်မီးသဂြိုလ်ထို့နောက်သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ အမှားဖခင် Wim တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး?
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မေလ 27 2018 အပေါ်	•9မှတ်ချက်
အဆိုပါအန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးအရာသငျသညျမီးသင်္ဂြိုဟ်နဲ့အသုဘရှုပ်ထွေးကြောင်းမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ကသတင်းစာပညာလွဲချော်အပေါ်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောအလေးအနက်အမှု၌လျှောနိုင်ပါတယ်။ ယခုငါတို့ [ ... ] ကကြေးနန်းဒါမကြာခဏအမှားများပြုလုပ်ပေမယ့်အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး၏ငါထင်အဖြစ်ပျောက်ဆုံးမှုကိစ္စအတွက်ပြည့်စုံရှိကွောငျးပွောနိုငျ
မိုက်ကယ် P. အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးများ၏လူသတ်မှုကျယ်ပြန့်လူသိများ: အတုသတင်းသို့မဟုတ်တကယ်တော့?
အတွက် Filed Anne တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး	by မာတင် Vrijland	ဇန်နဝါရီလ 11 2018 အပေါ်	• 24 မှတ်ချက်
မနေ့ကမီဒီယာ (ယခုလူတိုင်းအားဖြင့် P ကို ​​Panhuis အတိုကောက်သိတယ်သူ) မိုက်ကယ်ပီတိုးချဲ့အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးများ၏လူသတ်မှုသိမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါကရုတ်တရက်လိုလားသူ forma session တစ်ခုအတွင်းမှာထွက်လာနိုင်ဘူး။ ဒီမဟုတ်လုံးဝမထိုက်မတန်ပွင့်လင်း၏လိုင်းအတွက် [ ... ] အကြောင်း, အစောပိုင်းကနှုတ်ဆောင်ခဲ့ရသေးကြောင်း